Ukuba uyazikhanyela umnqweno wokuthenga i-skirt emfutshane okanye ugqoke nje ngokuba imilenze yakho igubungelwe, akufanele uyenze, kuba namhlanje kukho iintlobo ezininzi zeengubo ezifihla le mpazamo. Yintoni enxibayo ukuba intombazana inemilenze ephosakeleyo? Yiyiphi iketi, iingubo kunye nezicathulo zokukhetha?
Yintoni abantu abadumileyo besithi kwinqanaba leenyawo zabo?
Ngokutsho kukaAlexandro Pushkin eRussia, kunzima ukufumana ubuncinane emithathu imilenze ye-shapely.
Uyaziwa uKoco Chanel uyaqiniseka ukuba ngamadolo ayingxenye eyingozi kakhulu emzimbeni womfazi. Ngoko ke, iingubo ezimnyama ezimnyama kufuneka zigubungele indawo yamadolo.
I-Avot Christian Dior icebisa abafazi abaneemilenze eziphosakeleyo ukuba banxibe intamo.
Namhlanje, ukukhawuleka kwemilenze kulawulwa, umzekelo, ngoncedo lokuphuka kwamathambo. Kodwa ke, akuyona nje inkqubo ebiza kakhulu, kodwa kunye nemiphumo embi engathandekiyo neengxaki ezahlukeneyo.
Ukulungelelana ngeengubo eziphakamileyo, ubude obuncinane ngaphezu kwamadolo. Unokwenza ukhetho lokunciphisa okanye ulandelelanise imodeli. Thenga iziketi nge-twist. Ngokomzekelo, nge-cutoff yangaphambili.
Ukunciphisa ubude obufikelela kwisikhuku esiphakathi. Kwiingubo ezinjalo, eninzi imilenze ibonakala iphosakele.
Nosyayubki-maxi. Emva kwakho konke, inyaniso yokuba uyayithanda loo mizekelo ayithethi ukuba ufihle imilenze yakho.
Nangona kunjalo, sincoma ukuba sikhohlwe ngokukodwa malunga neengxaki, ngokumalunga nemilenze yemilenze. Emva koko, into enyanisekileyo, amantombazana angaphelelekanga imilenze inkulu kunokuba ibonakale kuqala.
I-Vjinsovyh trousers, ininzi yesini esilungileyo iyaziva ikhululekile, kunye namantombazana abaneemilenze yengxaki ayifani. Nangona kunjalo, akusiyo yonke imodeli efihla ukukhawuleka kwemilenze. Ngokomzekelo, iifestile ze-jeans ezineentambo ezimhlophe zingaphambukisa nakakhulu. Kuye kufaneka nakwiimodeli "ezifunyenwe". Ngako oko, kungcono ukuhlawula ingqalelo kwi-jeans okanye i-jeans encane.
Kwakhona, zishiye amaxesha amade kakhulu ngenxa yokuba ngaphantsi kwayo kuya kuhlanjululwa, okwenza ukuba imilenze ibe nemigangatho engaphezulu.
Ukongezelela, siyakucebisa ukuba ukhangele ngokuthe ngqo kwiingubo ezinqamlekileyo okanye iintolo zokutya.
Ngokubhekiselele kwilinen, kufuneka ibe neleyo ngokwaneleyo, ukwenzela ukuba ukukhawuleka kwemilenze ayiyi kukhethwa ngokukhawuleza.
Ulungelelaniso oluhle kunye ne-capri yokukhangela. Baya kuba yindlela ekhethileyo yokwenza iipketi kwixesha elifudumeleyo.
Amantombazana apheleleyo agqalwa ukuba athande izicathulo kwi-stud. Nangona kunjalo, ukuba imilenze yincinci, kungcono ukhethe izicathulo kwisithende esisezantsi.
Ngokubhekiselele kwi-boot, ke uthenge iimodeli ezinzima kakhulu. Kulungile, ukuba ngaba i-suede okanye isikhumba, ekubeni iibhothi ezinjalo ziza kuzisa i-foot of foot to the cadence. Ukuphakama kwezibhotshi kukhethwe ngabanye, kodwa kubalulekile ukuba ungakhohlwa ukuba usindiso lwangempela kwimilenze egobileyo yiijackboots. Kuzo zibhobho ezinjalo ukuba i-skirt esifutshane iya kuhlanganiswa ngokupheleleyo.
Gwema nayiphi na imivimbo kwiebhuthi kunye ne-pantyhose. Bakugxininisa ukukhawulwa kwemilenze.
Yeka ukhetho kwi-pantyhose yomnyama okanye omnye umbala omnyama. I-pantyhose ephathekayo, ngaphandle kwamacwecwe amacandelo, iya kubonakala ilungile.
Ukwahlula kunye nokunyameka kufuneka kube kuhle. Xa uhamba, amadolo kufuneka athintane.
Ekhaya, phambi kwesibuko, sebenzisa i-"rack" engcono kakhulu, eya kukunceda ukufihla ukujikeleza kwemilenze.
Smile, rhoqo ngangokunokwenzeka. Emva kokubonakalisa ukunganeliseki kwakho, uza kwenza abantu bacinge ngesizathu soluxhatshazo. Njengomthetho, baya kubeka ingqalelo ekubonakalayo, becinga ukuba ukuphazamiseka kwakho kuhambelana nayo. Yaye ndikholelwe, khawuleza ubone iinyawo zakho, ukuba ukhangelelene, zintloni, ukhathazeke ukuba umntu ukhangele kuwe.
Kodwa xa uthetha ukuzithemba, uya kuhamba kunye nentloko yakho kunye nokumomotheka, akukho mntu uya kujonga ingxaki yakho ngemilenze yakho, eya kukubangela ingxaki enkulu!
Isivuno sesitayela kwindlela yamanje
Ungatshintsha njani umfanekiso wakho kwiminyaka engama-45
Yintoni enxiba ngayo iebhattshi zesikhumba ukuze ukhangele isitayela?
Umdlalo omtsha wonyaka
Ulwandle lwangaphambili lokulahlekelwa ubunzima
I-recipe yekhekhe "i-Ryzhik" yonke imihla kunye netafile yeholide
Amanxeba omtshato, okanye indlela yokukhetha umtshato womtshato
Isaladi yaseGeorgia kunye ne-suluguni
I-Pie "Ububanzi" kwi-multivark
Iimpawu zezinwele zabasetyhini ubuso besikwere
Imfihlelo yamadoda onothando, okanye Indlela yokuqonda ukuba uyakuthanda